VB Insight: Mpanadihady ary mora azo, tatitra manerantany | Martech Zone
VB Insight: Mpanadihady ary tatitra mora vidy sy tena izy
Alarobia, Desambra 17, 2014 Alarobia, Desambra 17, 2014 Douglas Karr
Bryant Tutterow dia mpivarotra izay nitarika orinasa orinasa lehibe marobe amin'ny paikadim-bolany. Tena liana amin'ny fampiroboroboana votoaty izy, ao anatin'izany ny dokam-barotra amin'ny tambajotra sosialy, izay ahitan'ireo orinasa niara-niasa tamina valiny miavaka na eo aza ny resaka nataon'ny mpandinika maro. Faly be izahay milaza fa manampy i Bryant DK New Media miaraka amin'ny fanitarana ny fahaizany mampiroborobo koa!
Iray amin'ireo serivisy natolotray an'i Bryant ary manohy manolotra ny mpanjifanay dia mpanolo-tsaina mpividy entana. Ny ankamaroan'ny orinasa dia tsy manam-potoana na loharano hisafidianana vahaolana mety amin'ny indostrian'ny teknolojia marketing. Ary ny fanaovana fampiasam-bola enina na fito amin'ny fampiharana, fampidirana ary fampiasana sehatra iray izay mety dia mety handany orinasa an-tapitrisany… na ratsy kokoa… maty mosary noho ny tsy fahampian'ny isa sy ny fitazonana isa.
Ny fitarainan'i Bryant ao amin'ny indostria dia ny hoe matetika tsy misy ifandraisany ireo mpandalina ary lafo loatra ny tatitra ataon'izy ireo mba hanamarinana ny fandaniana. Case in point dia tatitra vao haingana izay nanambara Ny marika dia mandany vola amin'ny Facebook sy Twitter - tatitra iray mitentina $ 499 avy any Forrester izay mampifanaraka ny tetika rehetra ampiasain'i Bryant tamim-pahombiazana mba hampitomboana ny fangatahana sy ny tombom-barotra ho an'ireo orinasa iasany. fananganana fifandraisana ara-tsosialy -tserasera.
Bryant's izao dia manana vahaolana amin'ny VB Fahalalana!
Mampiditra ny VB Insight
Amin'ny alàlan'ny fifandraisana tsara amin'ny Ian Cleary, nifandray tamin'i Stewart Rogers tao amin'ny VentureBeat izahay. Stewart Rogers dia Tale, Marketing Technology ao amin'ny VB Insight, vokatra an'ny VentureBeat, manampy amin'ny famokarana fanadihadiana amin'ny indostrian'ny martech iray manontolo ary koa ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanoratra izay mampiasa ny sehatra hanaterana ny fandalinany sy ny tatitra ataon'izy ireo. VB Fahalalana dia fanangonana tahiry tsy mampino sy takatry ny tatitra an'ny indostrialy tena izy, nosoratan'ireo tena mpisera mampiasa ny tambajotrana VB ho an'ny fikarohana voalohany.
Nanasa ahy ho mpandinika ihany koa i Stewart! Nanomboka nandrafitra ny tatitry ny Mpanadihady voalohany ho an'ny VB Fahalalana amin'ny fanjakan'ny indostrian'ny fanatsarana ny motera fikarohana, nosoratana ho an'ny mpitantana marketing an'ny orinasa orinasa. Manantena izahay fa ho vita amin'ny voalohan'ny volana Janoary!
Vidio ny tatitra voalohany nataonao amin'ny vidiny 50%!
Stewart dia nanoratra tatitra mahatalanjona ihany koa momba ny fiantraikan'ny media sosialy sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa miaraka amin'ny statistika mampivadi-po momba ny demografikan'ny olona mitaraina amin'ny Internet ary koa ny fomba hanararaotan'ireo marika ny media sosialy hanatsarana ny serivisy ho an'ny mpanjifa eo am-panaovana varotra tsara ny marika misy azy ireo:
Fitaovana nomerika: mamadika ny fitarainan'ny media sosialy ho fandresena amin'ny marika.
Martech Zone ny mpamaky dia afaka manindry ny sary etsy ambany hividianana ny tatitra amin'ny vidiny 50% amin'ny vidin'ny lisitra!
[su_button url = ”http://bit.ly/audpcs50 ″ target =” blank ”color =” # ffffff ”] Vidio ny tatitra 50%! [/ su_button]
Tags: mpandalinatatitry ny mpandalinabryant tutterowForresterian clearystewart rogersvbventurebeat
Ahoana no mihazakazaka fitsapana A / B amin'ny pejy fitodiana
Inona avy ireo sehatra marketing tsara indrindra?